एकातिर ईश्वरको स्वामित्वमा रहेका जग्गा निजी स्वामित्वमा दर्ता हुने अभियान चलिरहेको छ भने अर्कातिर सरकारकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सरकारको हकदावी नलाग्ने वातावरण बन्दै गएको छ । डेढ दशकअघि हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको थियो– नेपाल ट्रस्ट । पुरा पढ्नुहोस्
कान्तिपुर सहरमा थुप्रै थकाली भान्छाघर खुलेका छन्, तर दाल–भात ख्वाउने सबै भान्छाघर आधिकारिक हिसाबले थकाली हुँदैनन् । आधिकारिक थकाली खाना र खाजा ख्वाउने भान्छाघर थोरै छन् कान्तिपुरमा । पुरा पढ्नुहोस्
कान्तिपुर सहरको इतिहास उज्ज्वल थियो । वर्तमान अलिकति खजमजिएजस्तो देखिए पनि सहर अँध्यारो नै भैसकेको छैन । हो, समय जटिल भएको छ । देशको राजनीति राष्ट्रिय एजेन्डाको शीर्षस्थानमा छ, तर यसले आमूल परिवर्तनका लागि, छिटो विकासका लागि, जनताको हितका लागि कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । विकासका चर्का नाराहरू सुनिएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
खेत रोपी रेल चढेर गएको भागिराम धान झुलिसक्दा, काटिसक्दा, फेरि रोपिसक्दा पनि किन आएन ?वर्ष–वर्षमा सरकार फेरिन्छन्, तर वर्ष–वर्षमा तुइन किन फेरिँदैनन् हाम्रो गाउँको ? अँ त्यो तुइनबाट खसेको एक टुक्रो देउडा गीत बग्दैबग्दै काठमाडौं आएको छ । कर्णाली भुलेर त्यो त्यहाँ ठमेल बजारका डान्सबारमा घन्किन्छ रे हो ? पुरा पढ्नुहोस्
किशोर नेपाल, वैशाख २३, २०७६
हामी निश्चय पनि उठ्नेछौं । कुनै पनि देशको युवा पुस्ता जब रचनात्मक काममा लाग्छ तब देशमा जागृति आउँछ । यो यस्तो अवसर हो जसले देशमा चेतनाको लहर फैलाउने मात्र होइन, विकासका लागि शारीरिक श्रम गर्नसमेत युवा पुस्तालाई झकझक्याउनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
किशोर नेपाल, चैत्र २१, २०७५
मारकाटको राजनीतिले पूरै देश बेहोस भएका बेला काठमाडौं सहर र दरबार मार्गमा इस्वी संवत्का दुई महान चाड क्रिसमस–न्यू इयर र भ्यालेन्टाइन डे धूमधाम मनाइएका थिए । तीनवटा नयाँ वर्षमा त दरवार मार्गका कुनै रेस्टुराँ, होटल, इटरी र पवमा पाइला राख्ने ठाउँसम्म थिएन । त्यो फेज आफैं सकियो । कसरी सकियो ? भन्न सकिँदैन । पुरा पढ्नुहोस्
किशोर नेपाल, चैत्र १५, २०७५
सरोज खनाल अलिकति पैसा कमाएर छोराछोरीको जीवनमा सुधार ल्याउन उता लागेका थिए । उनलाई गएको दिनदेखि नै देशको न्यास्रो लाग्यो । होमसिक । उनी कान्तिपुरको हावा पानी बिग्रेको देखेर अमेरिका लागेका थिए । उनले यो १७ वर्षको अवधिमा धेरै कुरा ‘मिस’ गरे । पुरा पढ्नुहोस्
किशोर नेपाल, फाल्गुन ३०, २०७५
पीपलको बोट चौतारीमा पत्रिका बेच्न बसेका कतिपय ‘हकर’ वास्तवमा सरकारका गुप्तचर हुन्थे । उनीहरूबाटै सरकारले थाहा पाउँथ्यो विद्यार्थीको कुन नेता के गर्दैछ र कुन नेता कहाँ छ ? आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु नयाँ सडक र पीपलको बोट भएकाले आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरू यसैको परिधिमा घुमिरहेका हुन्थे । त्यतिबेलाका आन्दोलन खतरनाक मानिन्थे । पुरा पढ्नुहोस्